I-TRAVERTINE PATIO (IIPAVILE KUNYE NESIKHOKELO SOYILO LWETILE) - IIPATIO KUNYE NEEDEKSI
Iingcamango Zegumbi Lokuphila
Eyona Iipatio Kunye Needeksi I-Travertine Patio (Iipavile kunye nesikhokelo soYilo lweTile)
I-Travertine Patio (Iipavile kunye nesikhokelo soYilo lweTile)
Nantsi eyethu isikhokelo setrafti yoyilo kubandakanya iintlobo zeepheyinti, iithayile, iipateni, indleko, ukugqiba kunye nokubekwa. Ipatio ye-travertine lutyalo-mali oluchanekileyo apho unokonwabela izinto ezisemgangathweni kunye nesitayile ngaphandle kokophula ibhanki. Yenziwe kwimpahla yethayile ebiza iindleko, ipatio yethrafikhi inokongeza ixabiso kwipropathi yakho kwaye yonyuse umtsalane wendawo yakho yangasemva.
Ngelixa iinkuni kunye nekhonkrithi ziphikisana nezixhobo zokuphila ngaphandle, akunakuphikwa ukuba iipavile zinikezela ngempembelelo ebonakalayo, ukuba azikho ngaphezulu koogxa bazo, kuxhomekeke kwinto oyithandayo.
Nangona kunjalo, amandla epatio enziwe kwiitayile ze-travertine kukuba ungonwabela ngaphandle nangaliphi na ixesha losuku okanye imozulu. Ngaphezulu, uyilo olunokwenzeka alunasiphelo, oluvumela abaninimzi ukuba banxibe umnqwazi womyili wabo kwaye bonwabele uninzi lwenkqubo yokuhombisa amakhaya abo.
Yintoni iTravertine Patio?
IPatio Travertine Tiles okanye iipavile?
Ubume bePatio yePatio
Travertine Patio Gqiba
Iindleko zeTravertine Patio
Uyicoca njani iTravertine Patio?
Ipatio ye-travertine lulwandiso lokuhlala kwakho ngaphandle iqhotyoshelwe ekhayeni lakho ngaphandle kophahla kwaye ineepavumente ezenziwe ngeethayile zethrafikhi.
Uya kwazi xa une-patio yetravertine ukuba ngaba unemivalo yamatye endalo akhangeleka engena kwaye enombhalo, ihlala inemibala yodongwe efudumeleyo. Nangona xa isanti isezantsi, i-travertine iyakubonakala igudile kodwa isenoboya obunamachaphaza.
Iipatio zeTravertine zinokuya kwinkangeleko yanamhlanje okanye yemveli apho umxholo we-rustic yeyona ndlela ithandwayo kunye nesitayile esiqhelekileyo kwilitye lendalo.
Ngokwenza iithayile ngokungafaniyo, zizinto ezigqityiweyo ezintle ezinokulingana nawuphi na umphezulu, ubenazo kwizicwangcisi zakho, indawo yokubasa umlilo ngaphandle, okanye izihlalo ezakhelweyo.
Umkhwa paver patios zikulungele ukuhamba kwaye zilungele ukusebenzisa iphuli yedama, ngenxa yokubonakalisa ubushushu kunye nokufunxa ubushushu obuphantsi obuhlala bupholile nokuba buvezwe phantsi kwelanga. Okona kubalulekileyo, umphezulu wayo erhabaxa uthetha ukuba awuzukutyibilika ngokulula naxa iithayile zimanzi.
Iinto zokuzilungisa: I-travertine yeyona ndlela inomtsalane yelitye lekalika. Ubumdaka bayo, ubumdaka obufana nemabhile kunye nemibala enomtsalane yethoni yomhlaba yenza ukuba ibe lelinye lamatye athandwayo asetyenziselwa izinto zokwakha.
Ukuhlala: Ipatio yokuhambahamba inokuma kuvavanyo lwexesha. Iithayile zethrafikhi, nangona zomelele kakhulu kwaye kulula ukuzigcina xa kuthelekiswa nezinye iintlobo zamatye endalo.
Umahluko phakathi kweethayile kunye neepheyile bubungakanani kunye nokusikwa komda. Iithayile zeTravertine zihlala zii-intshi ezi-intshi ubukhulu, ngelixa iipavile ziyatyeba ngobukhulu obungu-1 ukuya ko-4.
Omnye umahluko owahlulayo kukuba iithayile zijikeleze macala, ukuze zibekwe ecaleni ukuze zibukeke zingenamthungo. Ngelixa iipavile zihlala zicociweyo okanye zinqunqiwe.
Ubungakanani beethayile ezaziwa kakhulu zi-12 × 12, 12 × 24, 18 × 18, kunye no-8 x 12.
Xa ukhetha phakathi kweethayile kunye neepavile, qwalasela usetyenziso lwazo kwipatiyo yangaphandle. Ukuba ucwangcisa ukuba ujongeke ngaphandle komthungo, yiya kwiithayile zethrafikhi apho uya kuba negrout yokubamba iithayile endaweni yazo. Iithayile zeTravertine zinokubekwa kwiipatheni ezahlukileyo ezahlukileyo, ezinje ngezitena ezibekiweyo kunye neVersailles pattern.
Ugeza nini emtshatweni?
Ukufumana iipavourine ezinkulu zokuhamba, zinokubekwa ngaphandle kwegrout phakathi. Oku kuvumela isiciko somhlaba sendalo esifana nengca okanye iingqalutye zamatye ukuba zihambe phakathi kweepheyiji.
Ukuba nomphezulu ogangathiweyo kukuvumela ukuba amanzi emvula akhuphe ngokulula phakathi ngaphandle kwesidingo senkqubo yakho yokuhambisa amanzi. Icala elisezantsi elilelakho elinee-travertine pavers eziboshwe yingca okanye ngamatye amancinci kulondolozo olunxulumene nolungelelwaniso oluhamba nomhlaba ojikelezayo.
Unokudibanisa iithayile zethrafti kunye nepavili kwindawo yakho yokuhambahamba.
Ngobungakanani obahlukeneyo kunye nokusikeka okukhoyo, unokwenza iipateni ezahlukeneyo zepatio yakho kunye nokubopha. Ubume bendabuko obudumileyo ziiVersailles, izitena, iipateni zaseFrance kunye neHeringbone.
Ezinye iipateni zibandakanya:
Umzekelo weTraverine Paver
Olunye uncedo lwe-travertine njengezinto zakho zepatio kukuba kufumaneka. Ungayifumana itayile yelitye phantse kuyo nayiphi na ivenkile yethayile.
Kufuneka uyazi ukugqiba okufanelekileyo kwipatio yakho. Ukugqitywa kokuQinisekiswa, ukuHanjiswa, kunye nokuBrashwa kulungele ukusetyenziswa kwangaphandle ngenxa yomhlaba ocacileyo. Eyona ndlela ilungileyo yokutsala sebenzisa ukugqitywa kokuwa kwetravertine ebonakaliswa ziikona ezijikelezileyo kunye nemiphetho.
Nangona usenokufuna ukutywina ukuze ungangcoliseki. Ukuba ufuna ukugqitywa kwe-matte, yiya kwi-trailine ye-travertine tile.
Ukugqitywa kwe-honed, beza njengomphezulu omenyezelisiweyo oncomekayo kwitravertine iipati kunye noyilo oluvalelweyo .
Xa kuthelekiswa ne-marble, i-travertine ayibizi kakhulu kodwa isenokuba ngumthengi kune-granite okanye i-limestone. Nangona izibonelelo zayo ezingalinganiyo zepatio eyenziwe nge-travertine iseyindlela elungileyo.
Okwangoku, kwipatio eyenziwe ngomthi, ulondolozo oluphezulu kunye nemida yoyilo lwezixhobo inokukubeka kude ukuba ufuna ubuchule obungaphezulu kuyilo lwakho lwepatio.
UKUYA ipatio yekhonkrithi lukhetho olukhulu ngenxa yokufikeleleka kunye nokuyilwa okunokwenzeka. Umcimbi ekuphela kwawo ngekhonkrithi kukuba, njengomthi, uyanda kunye nezivumelwano xa uphantsi kwamaqondo obushushu agqithisileyo nokwahluka. Ubulumko bemali ipatio ye-travertine lukhetho olunokwenzeka.
I-travertine yeyelitye eliphakathi xa kuziwa kwiindleko zalo, nangona kunjalo ithathwa njengelitye lesiphelo eliphezulu lilonke. Ke, zibiza malini ipatio yethrafti?
Lindela ukuhlawula malunga ne-15 ukuya kwi-30 yeedola ngeenyawo zesikwere kwizinto kunye nomsebenzi. Oko kuxhomekeke kwinqanaba lokugqitywa, ukusikwa, kunye nethayile.
Umama unyana udanisa emtshatweni
Zininzi ezinye izinto ekufuneka ziqwalaselwe xa kuziwa kwiindleko zepatio ezinje ngobunzima bokuyila, ubungakanani bepati, kunye neempawu.
Njengesiseko, i-square ye-300 yendalo yendalo Ipatio yamatye inokulanda ukusuka kwi-3900 ukuya kwi-15,000 yeedola kuzo zombini izinto kunye nomsebenzi.
Ezinye izinto onokuzibandakanya kwi-patio yakho ye-travertine ngumgodi womlilo, ikhitshi yangaphandle, izihlalo ezakhelwe ngaphakathi, uphahla kunye nezivalo. Kuya kufuneka uthathele ingqalelo iimvume ezinokuhamba zijikeleze i- $ 300 ukuya kwi- $ 1900 ngokuxhomekeke kwindawo okuyo kunye neenkcukacha zeprojekthi. Izixhobo kufuneka zibekho phezulu kuluhlu lwakho.
Enye into emisela kwiindleko zakho kukuba ukhetha iprojekthi ye-DIY okanye uqesha ingcali. Ukuba nengcali yokufaka ipatio yetravertine yakho iyakusindisa ngakumbi ekuhambeni kwexesha kuba uqinisekile ukuba iindlela zokufaka ezifanelekileyo zenziwe.
Nangona unesakhono kwaye unokuzinikezela malunga neeyure ezingama-40 ukuya kwengama-50 zomsebenzi kwaye i-DIY lukhetho oluvakalayo.
Njengazo naziphi na izinto ezinamatye, kufuneka kwenziwe inkathalo efanelekileyo ukugcina kunye nokwandisa ixesha elide. Coca ipatio yakho yokuhambahamba usebenzisa isepha ethambileyo kunye namanzi kwiindawo ezingcolileyo kwaye ungaze usebenzise iviniga okanye ezinye iikhemikhali ezinobungozi ezinokuthi zigqibe isitywina.
Njengoko i-travertine inamafutha kungafuneka ukuba ubulale iintsholongwane, utshayele okanye ucofe kwaye ukope veki nganye ukuthintela ukungunda kunye nezinye izinto ezincinci ukuba ziqokeleleke.
Ukwafuna itywina elikhuselayo njengoko ukushiya ilitye kuvezwe kungakhokelela kumbala nakwibala. Ukuphinda uhlengahlengise kwaye uphinde uthengise kufuneka kwenziwe rhoqo kwiminyaka emithathu ukuya kwemihlanu.
Ukubona ngaphezulu iintlobo zeepatios Ndwendwela eli phepha legalari.
Ukubaluleka kokubhiyozela uthando lweSpanishi kunye neLatinx
U-Joy-Anna Duggar kunye no-Austin Forsyth's Registry yoMtshato Ngaba nguMxube ogqibeleleyo wokuSebenza kunye noNwabo
Ezi ziingoma ezili-17 ezilungileyo zomtshato zika-2018
U-Luann de Lesseps ufumana i-Lackluster Engagement Party kwi-'Amakhosikazi oqobo e-New York City ': Recap
Jonga iimpahla zikaPnina Tornai zoMtshato ezivela kwiVeki yeFashoni yomtshato
'Ukudanisa ngeeNkwenkwezi' Iinkonzo uEmma Slater kunye noSasha Farber Babelana ngeAlbham yabo yoMtshato yaseRussia kunye nesiNgesi
U-Priyanka Chopra utshintsha igama lakhe kwimidiya yoluntu emva kokutshata noNick Jonas
I-Corbin Bleu kunye ne-Sasha Clements 'I-Honeymoon engaxutywanga ibandakanya iiNdawo ezimbini eziMangalisayo
Izitayile zengalo yeSofa (Isikhokelo soYilo)
'Ukucwangciswa' Isiqendu sesi-4 sokujonga kuqala: UTaylor uyala ukuXolisa kuMelba
Igumbi lokuhlala eliVulekileyo (iiNqaku zoYilo)
Ukupeyinta Iingcinga ngeGumbi labantwana
uyilo Lwegumbi Lokulala
IGalia Lahav Debuts yokuQokelelwa kweNtsapho eNtsha yokuQokelelwa kweModeli kunye neTrans Woman uValentina Sampaio
Umhlekisi uJohn Mulaney Uqhawula uMfazi u-Anna Marie Tendler
Iwindows Window vs Window yokugoba
Izipho zomyeni kumtshakazi
Imibono yebhentshi yeshawa yeshawari
izipho zokuzalwa zothando kuye
amakhonkco okuzibandakanya edayimane nesafire
Isinxibo somtshato esisesikweni esisemthethweni
unxiba umsesane wokuzibandakanya emtshatweni
UJana Kramer utyhila amaXesha akhe aPhezulu ama-5 awathandayo kuMtshato wakhe; Kwaye iifoto!
Amanga Amakhulu Amakhulu 'uZoë Kravitz wayenengxoxo yakhe yokuzibandakanya evela kuKarl Glusman kuMboniso oPheleleyo kwii-Oscars Emva komcimbi
UPrincess Beatrice ubhengeza ukubandakanyeka ku-Edoardo Mapelli Mozzi